आमासँगै कस्तो गाइन् स्वरुपाले गीत ? हेर्नुस् भिडियो
निशान न्युज श्रावण १२, 2075
काठमाडौं । तीज हिन्दु नारीहरुको पीडा पोख्ने चाड पनि हो । त्यसमा पनि घर गरेर खाइरहेकी नारीले जन्म दिने आमाको काखमा बसेर पीडा पोख्ने चाड पनि हो तीज । यसैक्रममा गायीका स्वरुपा रसाइलीले आफ्नै आमासँग मिलेर तीजको नयाँ कोशेली ‘मिठो सम्झना’ पस्किएकी छन् । विजयकुमार सुनारको शब्द, बिबि अनुरागीको संगीत र ...
गायनमा धुम मच्चाउँदै श्रुती
श्रावण १२, 2075 कपिलवस्तु । श्रुति वर्मा ले १४ वर्षकी मात्रै भइन् । तर, यो कलिलो उमेरमै उनले गायनमा धुम मच्चाउन थालेकी छन् । उनका केही गीत सामाजिक फेसबुक, टुइटर, युटुब, इन्सटाग्राम जस्ता सञ्जालमा पोष्ट भएपछि एकाएक नेपाल लगायत भारत र अन्य...
कोसँग कम्मर मर्काइन् सारिकाले ? हेर्न...
श्रावण ११, 2075 काठमाडौं । नेपाली महिलाहरुको महान पर्व तीजलाई लक्षित गर्दै हरी सुवेदीले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । सुवेदीद्धारा निर्मित तीज गीत ‘मैले त मन्त्र पढे तिम्रै नामको’ बोलको गीतमा नायीका सारिका घिमिरेले कम्मर मर्काइमर्काइ अभ...
सञ्चारकर्मी र नायीकाको प्यार तीजको गीतमा
श्रावण ११, 2075 काठमाडौं । कलम चलाउने सञ्चारकर्मी र चलचित्र नगरीमा रमाउने नायीका मिलेर तीजको कोशेली ल्याउन लागेका छन् । सञ्चारकर्मी गीता अधिकारीको शब्द र सारिका घिमिरेको स्वरमा तीज गीत आउँदै छ । ‘दुःख पीर नमान सधैं आउने तिज हो’ बोलको गीत...
भदौ ८ मा ‘रेनी’ प्रदर्शन हुने
श्रावण १०, 2075 काठमाडौं । नयाँ फिल्म ‘रेनी’ भदौ ८ गतेदेखि प्रदर्शन हुने भएको छ । त्रिकोणात्मक प्रेमकथानक फिल्मको प्रदर्शन मितिसँगै फस्टलुक पोस्टर सार्वजनीक गरिएको हो । बिमला मल्ल र संजिव मल्लले निर्माण गरेको फिल्ममा सरोज खनाल, सुरवीर पण...
यि हुन् डान्स रियालिटी शोका टप थ्री प...
श्रावण ७, 2075 काठमाडौं । डान्स रियालिटी शो, ओपो बुगी वुगी सिजन–१ कार्यक्रमका टप थ्री प्रतिष्पर्धीको घोषणा भएको छ। गत शुक्रवार दर्शक भोटिङका आधारमा कार्यक्रम मार्फत अन्तिम ३ प्रतिस्पर्धीका रुपमा कविता नेपाली, प्रगती पुन र सरोज मोक्तान छन...
माधुरी दिक्षीतबाट प्रभावित कबिता डान्...
श्रावण ५, 2075 बुटवाल । बुटवलकी कबिता न्यौपाने यतिबेला डान्स नृत्य संगीतमा धुम मच्चउँदै छिन् । बुटवल उपमहानगरपालिका– ४ट्राफिक चौककी कबिताले हालै मात्र मणि मुकुन्दसेन कलेजबाट इंटरमिडिएटको परीक्षा पास गरेकी छिन् । कबिता बागेश्वारी सगिंताल...
निर्वाचनमा हारेका मेहता मोडलिङमा
श्रावण ४, 2075 सप्तरी । स्थानीय तहको निर्वाचनमा फोरम लोकतान्त्रिक नेपालबाट मेयर पदमा निर्वाचन लडेका मेहताले शुरुवाती अग्रता लिए पनि जित्न सकेनन् । चुनावका लागि करिब १ महिना खटेर ३ हजार ४ सय मत ल्याएका उनै मेहता भने अहिले मोडलिङतर्फ लागे...
काठमाडौंमा द फेशन शो हुने
श्रावण ३, 2075 काठमाडौं । काठमाडौंमा पहिलोपटक द फेशन शो (रन वे) हुने भएको छ । ग्लामर हन्ट ईभेण्ट प्रालिको आयोजनामा हुन लागेको सो शोको पहिलो संस्करणको अडिसन शनिवार हुँदैछ । फेशन शोमा १६ वर्षदेखि २८ वर्षसम्मका मोडलहरुले अडिसनमा सहभागी जना...
कान्ति बाल अस्पतालमा कलामा आधारित थेर...
श्रावण २, 2075 काठमाडौं । बुधबार कान्ति बाल अस्पतालको एउटा हल भरिभराउँ थियो । जुन हलमा काठमाडौंका अधिकांस अस्पतालका प्रमुख र डाक्टरहरु थिए । उनीहरु अरुबेला जस्तो विरामीको उपचार गर्न भेला भएका थिएनन् । उनीहरु कलाकारले बनाएका चित्र हेर्न ...
गुल्मीको तपोभुमी रेसुङ्गामा १ महिने स...
श्रावण १, 2075 गुल्मी । धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न गुल्मीको ऐतिहासिक तपोभुमी रेसुङ्गामा मेला सुरु भएको छ । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास अग्लो शिरमा पर्ने रेसुङ्गामा विगतका वर्षहरुमा जस्तै यस वर्षपनि मन्दीर ब्यवस्...
आर्यन र श्रृष्टीको ‘बाँध मायाले’ टिजर...
असार ३२, 2075 काठमाडौं । असोज ५ गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकिएको चलचित्र ‘बाँध मायाले’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएको टिजरमा दृश्यलाई स्थान दिइएको छ । संवाद समावेश नगरिएको टिजरमा नायक आर्यन अधिकारी र नायिका श्रृष्टी श्रेष्ठको प्र...
लोकेन्द्रको कोशेलीमा ‘मुहार भल्केको’ ...
असार ३२, 2075 कपिलवस्तु । तीज आउन झण्डै दुई महिना बाँकी छ । तर, नेपाली कलाकारलाई तीजले निक्कै व्यस्त बनाएको छ । उनीहरुलाई तीजका गीत रेकर्ड गर्न र म्युजिक भिडियो बनाउन भ्याइनभ्याई छ । यसैक्रममा गायक लोकेन्द्र सापकोटाले ‘मुहार झल्केको’ ब...
समनले कसलाई भन्दैछन्, संसार तिम्रै ? ...
असार ३१, 2075 काठमाडौं । समन सञ्जीव तामाङले आफ्नै शब्द र स्वरमा नयाँ गीत ‘संसार तिम्रै’ बोलके आधुनिक गीत लिएर आएका छन् । लम्जुङ घर भई वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा रहेका तामाङको स्वरमा सजिएको ‘संसार तिम्रै’ बोलको गीतलाई मनोज सा...
के छ ध्रुवको ‘जित पडी जाउ’ मा ? हेर्न...
असार ३१, 2075 काठमाडौं । पछिल्ला केही समययता लोकलयमा आधारित गीतले बजार पाइरहेको छ । त्यसमा पनि क्षेत्र विषेश तयार भएका गीतले राम्रो बजार पाउने गरेको छ । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा देउडा गीतलाई मेची महाकालीकै स्रोताले मन राउँछन् । भलै पू...
← अघिल्लो 12… 35 36 37 38 39 40 41 42 43 … 61 62 पछिल्लो →